Wararka - BAYAANKA
Saaxiibbada ganacsiga iyo alaab-gacmeedyada qaaliga ah,
Dhawaan, waxaa la ogaaday inay jiraan shirkado iyo shaqsiyaad si sharci darro ah u isticmaala magaca iyo cinwaanka shirkaddayada (Shijiazhuang Mets Machinery co., Ltd NO.1 Changjiang Road Shijiazhuang 050035 Hebei China Tel: 86-311-68058177) iyo macluumaadka kale ee shirkadda. u soo dir e-mayl bulshada weydiisanaya qaansheegad, dalbo macluumaad iwm. Shirkado badan oo helay e-mayl noocaas ah iyaga oo aan ogayn runta ayaa shirkaddeena weydiiyay emailka marar badan, waanan u sharaxnay si dulqaad leh.
Habdhaqanka sharci darrada ah ee kor ku xusan ee adeegsiga khiyaanada ah ee macluumaadka shirkadda ma aha oo kaliya inuu saameyn xun ku yeesho shirkadeena, laakiin sidoo kale wuxuu sababayaa qatarta qarsoon ee shirkadda ku heleysa emaylladan la khiyaaneeyo. Si looga fogaado inay tan oo kale dhacdo, waxaan halkan si xushmad leh ugu sheegaynaa sidan soo socota:
I. Kama war qabno dhaqanka shaqaalaha sharci darrada ah ee u adeegsanaya macluumaadka shirkadeena inay u sii daayaan emayllada bulshada, emailada kor ku xusan shaqo kuma lahan shirkadeena.
2. Shirkaddeenu waligeed uma fasaxin shirkad ama shaqsi bannaanka ah oo aan ka ahayn shirkaddayada. Si looga fogaado in lagu khiyaaneeyo, shirkadda qaata emaylka ayaa si toos ah wax u weydiin karta iyadoo na soo waceysa si loo xaqiijiyo xaqiiqada. (Telefoonka shirkadda kormeerkeeda: 0311-68058177.)
3. Si ciqaabta loo ciqaabo, shirkadayada waxay dacwadda u gudbisay waaxda amniga guud ee anshax xumada kor ku xusan, waxaana sugeynaa caawinta waaxda amniga guud ee baaritaanka.
Isku soo wada duuboo, shirkadeenu waa shirkad diiradda saareysa badeecadaha bamka iyo adeegyada sanado badan. Shirkaddu had iyo jeer waxay tixgelisaa tayada wax soo saarka sida nolosha shirkadda, waxay u hoggaansantaa mabda'a shaqeynaya ee macaamiisha ah, iyadoo la adeegsanayo bakhaarada ugu badan ee dayactirka iyo kooxda ugu badan ee xirfadleyda iibka kadib si loogu adeego warshadaha macdanta iyo bulshada.
Waxaan halkan ku caddeynaynaa!